Hargeysa: Koox Ka Socota Australia Oo Guul-darro U Xambaarisay Xulkii Ku Guuleystay Tartankii Kubadda Cagta Ciyaaraha Gobolada Somaliland Ee Awdal
You are here: Home somal Hargeysa: Koox Ka Socota Australia Oo Guul-darro U Xambaarisay Xulkii Ku Guuleystay Tartankii Kubadda Cagta Ciyaaraha Gobolada Somaliland Ee Awdal
Koox dhallinyaro qurba-joog ah oo ka socota dalka Australia ayaa maalintii shalay guul-darro u xambaariyey xulkii horyaalka kubadda cagta gobolada Somaliland ee Awdal, kadib markii ay 3-2 kaga guuleysteen
Kooxdan ka socotay dalka Australia ayaa safar ciyaareedkoodan ay ku yimaadeen Somaliland ujeedadiisu ahayd dal barasho iyo inay wax baddan ka soo ogaadaan dhaqanka bulshadooda, maadaama ay ka koobnaayeen dhallinyaro intooda baddan ku dhashay kuna koray wadanka dibadiisa.
Waxaa kulanka ka qeyb-galay daawashadeeda Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska Md. Maxamed Xuseen Dhabeeye, Agaasime waaxda ciyaaraha Mr. Maxamed Nuux Jibriil, Guddoomiye xigeenka xidhiidhka kubadda cagta Mr. Cabdicasiis Maxamed Daahir, Xoghayaha guud ee xidhiidhka Mr. Samatar Maxamed Cabdilaahi, ruug-cadaayadii hore ee kubadda cagta, marti-sharaf iyo dadweyne aad u tiro baddan.
Kulankii shalay oo ka dhacay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ayaa ku bilawday jawi cirku rooban yahay oo aad u wanaagsan, waxaana labada kooxoodba garoonka la soo galeen ciyaar diiran oo farsamadeedu aad u sarayso, waxaana koox walba ka go’neyd inay guul gaadhaan. Qeybtii hore ee ciyaarta oo gobolka Awdal aad looga gacan sareeyay ayaa lagu kala nastay 2-0 ay hogaanka ku hayso kooxda qurba-joog ah ee ka socotay dalka Australia, waxaana goolashaas oo qurux badnaa u kala saxeexay ciyaartoyda Axmed Coonka iyo Mahad Gacal.
Xulka Kubada Cagta ee Gobolka Awdal
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii la iskugu soo noqday ayaa xiisihii ciyaartu cirka isku sii shareeray, waxaana xulka gobolka Awdal ay garoonka la soo galeen weerar xoogan oo ay ku qaadayeen kooxda ka soo horjeeday, laakiin difaaca kooxda reer Australia ayaa isku-day kasta hor-istaagay. Markale kooxda qurba-joog ah ee Australia waxa ay la yimaadeen goolkoodii 3-aad, waxaana markale u saxeexay laacibkooda Axmed Coonka oo la odhan karo wuxuu ahaa ciyaartoygii ugu fiicnaa kulankaas “Player of the Macth”.
Kooxdii Ka socotay Jaaliyada Somaliland ee Dalkaasi Australia
Intaas wixii ka dib xulka gobolka Awdal ayaa dedaalo baddan sameeyay maadaama goolal baddan laga horeeyo, waxaana ay la yimaadeen goolkoodii 1-aad, waxaana u dhaliyey gool-dhaliyahooda numberka 9-aad ee Bahdoon. Markale dhammaadkii ciyaarta gobolka Awdal ayaa la yimid goolkoodii 2-aad, waxaana u saxeexay Cabdiraxmaan Dirri, waxaana aakhirrkii ciyaartu ku soo gabagabawday 3-2 ay guushu ku raacday kooxda qurba-joog ah ee ka socotay dalka Australia.
Ciyaartoyda xulka kubadda cagta gobolka Awdal ayaa waxaa ka muuqday daal baddan iyo diyaar garaw la’aan, maadaama tan iyo markii ay ku guuleysteen koobkii kubadda cagta tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland 2016 aanay kulmin. Kooxdan qurba-jooga ah ayaa sidoo kale maalintii Salaasadii la ciyaaray kooxda heerka koowaad ee Xanaanadda Xoolaha, waxaana kulankaas 1-0 ay guushu ku raacday kooxda Xanaanadda Xoolaha.
Isku soo wada duubo waa markii ugu horeysay ee koox qurba-joog ahi ay Somaliland safar ciyaareed ku yimaadaan, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay muddadii ay joogeen dalka Wasaaradda ciyaaraha, xidhiidhka kubadda cagta, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Awdal iyo sidoo kale ruug-cadaayadii kubadda cagta oo ay ka mid yihiin Axmed Qaldaan, Luqmaan, Sacad Maxamed Shire, Axmed Aflax iyo Xasan Waraabe Cadde.